ကားမောငျးသူအသဈတဈဦးကို မိတျဆကျပေးကာ ပိုကျဆံပိုမိုရှာဖှပေုံ | Uber
မိတ်ဆွေ အသစ် များခေါ်လာခြင်းအားဖြင့် ၀င်ငွေ ပိုရှာလိုက်ပါ
Uber နှင့် လက်တွဲ ဖို့ အသိ ၊ မိတ်ဆွေ ၊ စိတ်ဝင်စားသူများကို Uber သို့ နာမည်စာရင်းသွင်း ရန် ခေါ်လာပြီး လူကြီး မင်းခေါ် လာသည့် မိတ်ဆွေ အတွက် Uber မှ ပထမ ဆုံး သတ်မှတ် သည့် ခရီးစဉ် ပြီးဆုံးခြင့်းဖြင့် ၀င်ငွေ ပိုမိုရရှိနိုင်ပါသည်
မိတ်ဆွေ အသစ် ခေါ်လာခြင်းဆိုတာ ဘယ်လိုပါလည်း
မိတ်ဆွေ အသစ်များ ကို Uber နှင့် လက်တွဲဖို့ ဖိတ်ခေါ်ခြင်း
Uber app အသုံးပြုပြီး အသိ မိတ်ဆွေ များကို လူကြီးမင်းရဲ့ Invite code ကို ပို့ခြင်းဖြင့် စာရင်းပေးသွင်းဖို့ ဖိတ်ခေါ် လိုက်ပါ
ယခု ဘဲ ဖိတ်ခေါ် လိုက်ပါ
ခရီးစဉ် စတင် ဖို့ ကူညီလိုက်ပါ
သင့် မိတ်ဆွေ စာရင်းပေးသွင်းမူ့ အတွက် အပြီးကူညီပြီး Uber မှသတ်မှတ်ထားသည့် ခရီးစဉ်အကြောင်းရေ ပြည့်ပြီး သင့်အတွက် အပို ဆုငွေ ရယူလိုက်ပါ
လူကြီးမင် ရရှိတဲ့ အပိုဆုငွေ
လူကြီးမင်း ခေါ် လာသော ယာဉ်မောင်း သည် Uber မှ သတ်မှတ်ထားသည့် ခရီးစဉ်ကြောင်းရေပြီးဆုံးပါက လူကြီးမင်း ရရှိမဲ့ အပိုဆုငွေ ကို အကောင့် ထဲ သို့ ထည့်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး Uber app ထဲမှာလည်း ပေါ်မှာဖြစ်ပါသည်
ရိုးရှင်းသော လုပ်ဆောင်ချက်ဖြင့် အသိ မိတ်ဆွေ များကို ဖိတ်ခေါ် လိုက်ပါ
Uber app ကို အသုံးပြုပါ
‘Earnings’ ကို နှိပ်လိုက်ပါ
လူကြီးမင်းရဲ့ . Uber app ကိုဖွင့် ပြီး Earning ကို နှိပ်ပေးပါ
‘Invite to Earn More’ ကို ဆက် နှိပ်ပါ
‘Invite to Earn More’ ကို နှိပ်ပြီး လူကြီးမင်းရဲ့ contacts ကို ရောက်သွားမည်ဖြစ်သည်
'Send Invites' ကို နှိပ်ပါ
contact တစ်ခု ကိုေ၇ွးချယ်ပြီး Send Invites ကို နှိပ်ခြင်းအားဖြင့် သူငယ်ချင်း များ ကို invite code မျှဝေနိုင်ပါတယ်
အသိ မိတ်ဆွေ များ အား ဘယ်လို မိတ်ဆက်ပေးရမလဲ ကြည့်ပါ
အသိ မိတ်ဆွေ များအား Uber နှင့် လက်တွဲ မောင်းနင်ရန် မိတ်ဆက် ပေးခြင်းအားဖြင့် ၀င်ငွေ ပိုမိုရရှိနိုင်သည်ကို video ကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် အသေးစိတ် လေ့လာနိုင်ပါသည်။
ပိုမို အချက်အလက်ရရှိနိုင်ရင် referrals help section ကို သွားရောက်လေ့လာနုိုင်ပါတယ်
Referral အပိုဆုငွေ ရရှိဖို့ လူကြီးမင်းခေါ် လာသည့် ယာဉ်မောင်းသည် Uber မှ သတ်မှတ်ထားသသည့် ခရီးစဉ်ကြောင်းရေ ပြီးဆုံးရမည်ဖြစ်သည် လူကြီမင်း ရရှိမည့် Referral အပိုဆုငွေ တွက် လူကြီမင်း အကောင့်ထဲသို့ ထည့် ပေးမည်ဖြစ်ပြီး Uber မှ အပတ်စဉ် ငွေပေးချေမူ့ မှာ တွေ့ရှိမည်ဖြစ်သည်။
အပိုဆုငွေ ရရှိဖို့ ပထမ လူကြီးမင်း ခေါ် လာသည့် ယာဉ်မောင်း သည် Uber တွင် စာရင်းပေးသွင်းရမည်ဖြစ်သည် လူကြီးမင်းရဲ့ invite code or link ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့်လည်း မိတ်ဆွေ သစ်များ ဖိတ်ခေါ် နိုင်ပါသည် လူကြီးမင်း ဖိတ်ခေါ် သည့် ယာဉ်မောင်းသည် မလေးရှား နိုင်ငံတွေ ရှိသော Uber မှာ စာရင်းသွင်းပါက လူကြီးမင်း ရဲ့ . Referral အပိုဆုငွေ တွက် ထိုနိုင်ငံ တွင် ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်၊
ယခု လောလောဆယ် Referral အပိုဆိုငွေ အချက်အလက် များကို လူကြီးမင်းရဲ့ Uber app ထဲမှ Home တွင် အသေးစေ့ မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ် Referral အပိုဆုငွေ သည် ပြောင်းလဲနိုင်ပြီး တစ်မြို့ နှင့် တစ်မြို တူမည်မဟုတ်ပါ
Web page တွင် တင်သော ရည်ရွယ်ချက်သည် သတင်းအချက်အလက် အတွက်သာဖြစ်ပြီး လူကြီးမင်း နေထိုင်သည့် မြိုတွင် ထိရောက်မူ့ ရှိ ခြင် မှ ရှိမည်ဖြစ်သည်